Akpa akwụkwọ Kraft na-adabere na akwụkwọ osisi pulp, agba na-ekewa n'ime akwụkwọ kraft na-acha ọcha na akwụkwọ na-acha odo odo, nwere ike iji ihe mpempe akwụkwọ na akwụkwọ ahụ na ihe nkiri nke ihe nkiri, mmetụta mmiri na-adịghị, akpa ike nwere ike ime dị ka ihe ndị ahịa chọrọ si otu okpukpu isii, obibi na ntinye akpa. Op ...
site ha na 20-11-06
Omume niile nke Hongbang jupụtara na owuwe ihe ubi. Na ngosi ngosi mba ụwa na Indonesia, Hongbang pụrụ ọzọ. Ọ bụ ihe ịga nke ọma zuru oke ma gbaa ajụjụ ọnụ na TV TV mpaghara. N'ime ihe ngosi a, anyị na-egosipụtakwa mmụọ nke Hongbang - ịdị n'otu, nke ziri ezi, nke siri ike ...
7th Hong Kong International Printing and Packaging Exhibition is a prestigious and rare one-stop business platform for the industry. 7 nke Hong Kong International Printing and Packaging Exhibition bụ ugwu na azụmaahịa na-adịghị ahụkebe maka azụmahịa. Ọ ghọọla akwa mmiri dị mkpa na njikọta na-ejikọ obibi akwụkwọ na ndị na-eweta nkwakọ ngwaahịa na ndị nrụpụta ụwa, ndị na-eweta ọrụ ...